Ileba Ngosi - Shijiazhuang Yiling Hospital
Ileba nọmba otu:
Mr Xiao, 67 afọ, bụ isi imeju cancer, AFP1000u / ml, abdominal CT: ibu imeju cancer, na Baịbụl hiwere isi n'ebe ụdị, akpụ adị nri usụhọde vena cava na portal akwara, na mbuso agha imeju Capsule na subcapsular effusion, imeju, portal akwara broadening , cholecystitis, drainage gburugburu gallbladder, otu ngwa splin. Nyere interventional embolization + Chinese na nkà mmụta ọgwụ na ndị ọzọ na integrated agwọ ọrịa. Mmadụ doro anya.
Ileba nọmba abụọ:
Fan Yusuo, nwoke, 57, nri ọrịa cancer akpa ume, daa ọrịa nke squamous cell carcinoma, ngwọta-etinye aka n'ihe na-akpa ume akwara, na efu ohere maka ọrụ, Radiotherapy na-contraindicated.
Nye ya integrated ọgwụgwọ, akụkụ nke ọgwụgwọ na-agụnye: ọgwụ + Interventional + hyperthermia.
Ugbu a nrụpụta nwale ČR (full ngbaghara), ruo ugbu a na-adị ndụ karịa afọ 3, na-ejikarị.
Wang Moumou, nwoke, afọ 54, Shijiazhuang. Ọ na-kwetara na ụlọ ọgwụ dị na July 2010 n'ihi nkụnwụ na ya na nsọtụ na adịghị ike n'ihi na ihe karịrị otu afọ.
Na July 2009, onye ọrịa mere mkpesa nke nkụnwụ nke ya na mkpịsị ụkwụ mgbe ịfụ ikuku-oyi ya mkpesa, na n'oge na-adịghị e nkụnwụ ma mkpịsị aka, nke e jiri kpọrọ ihe. September n'ebe ndịda na a njem azụmahịa, e fever, ọgwụ nje ọgwụgwọ fever azụ, n'aka-ụkwụ nkụnwụ mgbaàmà nwayọọ nwayọọ na proximal mmepe, na-esonyere adịghị ike, na-eje ije na-anara, na n'ógbè ụlọ ọgwụ na-elele okpokoro isi na cervical vertebrae dịghị isịneke, ka udo na ụlọ ọgwụ na-elele The lumbar spain gosiri "lumbar 2-3 intraspinal neurofibroma", na myoelectricity gosiri "distal akwara nhata na distal muscle." Na November, ọ gara Tiantan Hospital ịrụ akwara n'ọbọ akpụ resection.
Postoperative arọ ọnwụ bụ 20 jins, nkụnwụ na nsọtụ nwayọọ nwayọọ mụbara, na-eje ije akwusighi, nkịtị mmamịrị, amagh onwe aghara, na e nwere mmiri n'etiti ụkwara, binocular ọhụụ na obere kwụ nystagmus, February 2010 na n'ógbè ọgwụ, Lelee myoelectricity egosi "symmetry , distal moto axons, myelin ọnya, sensory akwara kpamkpam mebiri emebi ", bilateral nkịtị kpaliworo potentials, ndiiche brainstem-auditory kpaliworo nwere, dị ọcha ụda audiometry egosi binaural akwara Sexual spasm, enweghị nchịkwa" ala ala neuropathy "nke ekpe sural akwara biopsy, chọpụtara dị ka" Green-Ballie syndrome ", Nye nnukwu-dose gamma bulbs, belata homonụ na zụọ irighiri akwara, melite mgbasa ọgwụgwọ, kpochapụ ihe mgbaàmà nke phlegm, belata nkụnwụ na aka na ụkwụ, naputa site na arọ ọnwụ, na-eje ije n'èzí. Mgbe agbapụta n'ahụ, ọnọdụ bụ dịtụ mụ, mgbaàmà nke nkụnwụ na nsọtụ nke na nsọtụ ka nọ doro anya, na-adịghị ike nọ n'okpuru ikpere, ndị na-eje ije bụ ejighị n'aka, na ọ bụ ike na-ebili na-emechi anya ma ọ bụ na-eje ije n'abalị, otú ahụ ka m wee anyị ọgwụ n'ihi na ọgwụgwọ.
Mgbe 4 izu 'ọgwụgwọ na anyị ọgwụ: Mgbaàmà nke nkụnwụ na njedebe nke aka na ụkwụ na-mma, na flexion ụkwụ bụ 4th ọkwa, na-eje ije dị ike. Na-elu-: nnọọ dịghị nlọghachite, kwesịrị ndụ na-arụ ọrụ. N'ihi na nke ohere, anyị ike na-egosi ndị ọzọ nke anyị usoro ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata kpọmkwem ọgwụgwọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site email.
Ị nwere ike ịtụrụ Chinese na nkà mmụta ọgwụ ọgwụgwọ ná mba ọzọ?
N'ikwu eziokwu na-ekwu okwu, mfe Chinese ọgwụ na-hụrụ na mba ọ bụla, dị ka ogologo dị ka e nwere Chinese na nkà mmụta ọgwụ ahịa. Otú ọ dị, Ịhazi Chinese na nkà mmụta ọgwụ agwọ ọrịa adịghị ná mba ọzọ. Dị ka ha ga-adị dabere na gị kpọmkwem ọrịa ọnọdụ. Na na bụ ya mere anyị ga-ajụ gị dọkịta kwuru na n'oge na-na nkwurịta okwu, nke mere na anyị nwere ike nyochaa gị ọnọdụ na nkọwa na-eme ka ahụ ọgwụgwọ plan.
Gịnị ọrụ anaghị Chinese na nkà mmụta ọgwụ nwere?
N'oge dum agwọ ọrịa, Chinese ọgwụ na-egwu ndị na-esonụ ọgwụgwọ mmetụta:
1. Ịmụba ọbara arịa niile ahụ
2. Ịba ọbara eruba n'ime akụrụ na rụọ ọrụ ndị ọbara na
3. edozi ọbara na wepụ stasis
4. Inye ezigbo nri na oxygen na akụrụ
5. Ịba onwe onye na-curative ike nke mebiri emebi akụrụ mkpụrụ ndụ
6. Iwusi Qi, otu ihe dị mkpa ike, na ahụ
7. Rụọ akụrụ filtration ọnụego
Na 2 izu ọgwụgwọ, African-arịa ọrịa shuga ndidi natara Integrated n'imeso ihe. All mkpara ụtọ ịhụ ọ na-na-mma.
TCM ọgwụgwọ technology, TCM decoction, medicated ise mmewere bath, dị mkpa n'ebe ọdịda anyanwụ na nkà mmụta ọgwụ ....
Ma eleghị anya, ị pụrụ ịhụ ịhịa aka n'ebe ọ bụla Otú ọ dị, ihe anyị nwere bụ Tuina, nke na-arụ ọrụ ke n'ime akụkụ, n'ime usoro, ọ bụghị nanị na ịhịa aka n'ahụ na akpụkpọ ma ọ bụ muscle; ma eleghị anya, ị pụrụ ịhụ igba okpukpu n'ebe nile, Otú ọ dị, ọ bụla acupoint, ọ bụla n'akuku, ọ bụla omimi nke ahụ bụ, na-arụ ọrụ; ma eleghị anya, ị pụrụ ịhụ medicated bath n'ebe nile, Otú ọ dị, anyị na-eji ise mmewere ozizi na-eduzi ya, dabere na kpọmkwem ahụ ọnọdụ, nke mere na enyemaka na ndidi ya onwe ya.
Mmetụta pụrụ ikwu okwu.